ozi | Li Tim-Oi Foundation
Oge ndị mara mma dị n'ihu
O meela obere oge kemgbe ị nụrụ n’ọnụ anyị, ọtụtụ ihe mere n’oge ahụ. Echetara m akụkọ nke nwanyị Zarefat ahụ di ya nwụrụ, onye nọ na ntụ ọka buru ibu na otu ntakịrị mmanụ mgbe otu onye nke Chineke bịara wee rịọ maka nri. Ga-ahụ etu nwute ya na obi erughị ya ala n'ihi na nke a bụ nri ikpeazụ ọ ga-esi esi, soro nwa ya rie ma kwadebe ịnwụ maka agụụ!
Ihe karịrị otu afọ gara aga, dịka Ndị Nlekọta nke Li Tim Oi Foundation, anyị hụrụ onwe anyị na 'njedebe ikpeazụ' nke ihe onwunwe anyị, ebe anyị kwụrụ ụgwọ maka afọ mbụ maka ụmụ akwụkwọ anyị kwenyere ịkwado mana anyị ejighị n'aka kpamkpam otu anyị ga-egbo mkpa maka usoro ọmụmụ ha fọdụrụnụ. O juru anyị anya na ọ joyụ, Onyenwe anyị nyere anyị site na mmesapụ aka na anyị enweela ike igbo mkpa ụmụ akwụkwọ ahụ niile, ugbu a.
'Maka ugbu a' ọ pụtara na anyị ga-anọgide na-adabere na nkwado nke ndị enyi nke Foundation, dị ka gị, iji nyere aka gboo mkpa nke ụmụ nwanyị anyị nyere onyinye n'ọtụtụ ụwa. Nke a bụ ka ha nwee ike bụrụ ndị ọrụ mgbanwe na mgbanwe n’ọgbakọ ha, obodo ha na dayọsis ha. Ihe anyị na-aga n'ihu na ogo ha rụgoro na-eju anyị anya. Anyi na-anụ maka ndu onye ọhụụ na ikwesị ntụkwasị obi na ije-ozi obi ike n'ime ọnọdụ ndị kacha sie ike.
Ngwurugwu Li Tim Oi na-agabiga oge nyocha na nghọta iji hụ otu anyị ga-esi kwado ndị inyom ka mma. N'ime afọ iri abụọ gara aga, anyị akwadoro ihe karịrị ụmụ nwanyị 20 sitere na mba iri abụọ maka ọtụtụ ọrụ dị iche iche, gụnyere ndị isi ebe ọ họpụtara, ndị mgbasa ozi ọma, ndị ndụmọdụ akwụkwọ, ndị ọrụ obodo na ndị ọrụ ahụike, ndị isi diocesan na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ikwu na ụdị nkwado ahụ adịkwaghị mkpa. O di nwute, nke ahu adighi. N'ọtụtụ ọdịbendị ka amatabeghị ọnọdụ kwesịrị ekwesị ụmụ nwanyị nọ na ya. N'ihi esemokwu ndị na-adịbeghị anya, n'ụzọ ụfọdụ mkpa ọ dị ngwa ngwa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ. N’ọtụtụ mba enwere ụkọ agụmakwụkwọ na ọzụzụ ka ukwuu, ọkachasị maka ụmụ nwanyị, ndị a ka na-anọchite anya ha n’ọzụzụ nke izizi na mmụta ozị ọzọ.
Ruo ugbu a, Ntọala ahụ lekwasịrị anya na ọzụzụ izizi n'ofe dịgasị iche iche na ọmụmụ ihe dị iche iche, mana ndị Trustees bịara matawanye ụkọ ụmụ nwanyị nọ n'ọkwa dị elu (MA & PhD). Anyị ghọtara na ọ bụrụ na anyị ga-enyere ụmụ nwanyị aka ka ha bụrụ ndị isi na ndị nkuzi mmụta okpukpe n’ọdịnihu ma nweta ọkwá dị elu n’ọhịa ndị ọzọ, anyị ga-agbanwe iwu anyị. Obi dị anyị ụtọ maka ihe mgbanwe ndị a ga-apụta maka ụmụ nwanyị anyị na-akwado, anyị kwenyere na ọ ga-agbasawanye ikike anyị nwere iru ọtụtụ ụmụ nwanyị.